Bineeldoota - BBC News Afaan Oromoo
Gosni qurxummii kuni bakka baay’ee kan argamu yoo ta’u bulchiinsota Ameerikaa 15 keessatti mul’ateera. Qondaaltonni tatamsa’ina isaa to’achuuf baay’ee carraaqaa jiru. Qurxummiin kuni lafarra deemuu kan danda’u yoo ta’u waana arge mara nyaata jedhameera.
Erga Botsawanan bara 1966 walabummaashee gonfattee as paartiin BDP filannoo hunda mo'achaa yoona ga'eera, kan ammaa garuu wantoonni jijjiiran jiraachuu malu.
Maadrid festivaala waggaa waggaan kabajamuuf hoolotaan guutamte
Holootni 2,000 ol tahan festivaala waggaatti altokko kabajamuuf daandiitti bahaniiru.
Awustiraaliyaan akkaataa fardeen qalamuuf jedhan qabaman irratti qorannoo eegalte
Erga gabaasni TV fardeen gugsii Awustiraaliyaa qalamuuf jedhan irratti badii raawwatu gabaasee booda komiin guddaa ka'e.
Keeniyaatti Harree diidoon gogaa bifa warqee qabdu argamte
Keeniyaatti Harreen diidoo gogaa bifa warqee qabdu argamte
Harreen diidoo mooraa keessaa miliqee balaa gesisee ajjeeffame
Harree diidoo miliqan lama keessaa inni tokko balaa geesisuusaatiin ajjeeffameera.
Ajjeechaa Kangaaroo: Dargaggeessi lammii Awustiraaliyaa ajjeechaa bineensota 20 himatame
Dargaggeessi ganna 19 bineensotarraan balaa geessisee kun "gocha gadheedha" jedhameera.
Sanyii jaldeessaa seera namaaf baheen Ameerikaa galte
Jaldeessi kun Oraangutuun jedhamti. Seera ilma namaatiif qofa kabajamuun gara buufata bineensoota Ameerikaatti argamuu kan galteedha.
Lammileen Xaaliyaan abbaafi ilmaan booyyee adamsaa wayita jiranitti ilmichi abbaatti dhukaasuun ajjeese
Poolisiin biyyattiis ilma namicha umuriin isaa ganna 34 ta'e abbaa isaa kan umuriin isaa ganna 55 ta'e ajjeese himannaa irratti baneera.
Maanguddoon wagggaa 87, Hilaarii Adaayar bakka jireenyaa isaaniitti loon mufataniin jifatamanii du'uunsaanii dhagahame.
Lammiin Ameerikaa kutaa biyyaa Wisconsin keessa jiraatu farra summii bofaa barbaacha yeroo 200 ol bofaan hiddame, yeroo 700 ammoo summii bofaa of hakkameera.
Yeroo baay'ee namoonni soba yoo dubbatan adda baasuu kan dadhabnuuf xiyyeeffannaan keenya waan mul'aturra waan ta'eefiidha jedhu qprattoonni.
18 Fuulbaana 2019
Miseensi paarlaamaa Sarbiyaa duraanii kan amma harree horsiisaa jiran annan harreerraa areera oomishaa jiru. Gosni nyaataa kuni akkuma addunyaattu nyaata qaaliidha. Maaliif akkana qaali ta’e garuu?
17 Fuulbaana 2019
Namoota afur du'an keessaa lama obbolaa yeroo ta'an Kaaba Xaaliyaanitti oomisha annanii gurguddaa qabu turan.
Bineensi yeroo baay'ee namatti hin buune Kaanaadaatti dubartii ajjeese
Kaatiriin Siweet- Muuller oddola daanga Ameerikaafi Kanaadatti argamu bashannanaaf deemte ajjeefamte.
6 Fuulbaana 2019
Bofni mataa lamaa, ija afurii Ameerikaatti argame
Kanneen naannoo qoratan akka jedhanitti bofni kuni silaa bineensota biraan adamfamuu danda'a ture jedhu.
Re’oonni qabeenya miseensa paartii Aranaa ta’an 13 'hidhaman'
Aranaa Tigraayiifi abbaan qabeenyichaa re'oonni hidhamuu isaanii erga mirkaneessanii booda kan isaan hidhaman namichi waan qabeenya miseensa paartii Aranaa ta'aaniifi jedhaniiru.
Jiraataa magaalaa Arbaaminci Obbo Toomaas Taamaa naacha waliin waggoota 30 oliif jiraataniiru. "Naachi akkuma beeylada manaati" jedhu. Ammoo gaaf kaan naachi foon irraa cuffatee hospitaala galanii akka turanis nutti himaniiru.
Tuuta Arbaa Keeniyaa godaansarra jiran karaan jalaa bade
Gareen Arbaa kuni dogongoraan 300km gara Lixa biyyattiitti imalanii bosona Timborowaa jedhamu keessa of argan.